सिसडोलमा फोहोरको डाँडो [फोटोफिचर]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १, २०७५ तस्बिर : कविन अधिकारी
काठमाडौँ — नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइट चुलिएसँगै राजधानीका सडक, चोक र घर–घरमा फोहोरको डंगुर थुप्रिन थालेको छ । ल्यान्डफिल साइटमा बनेको ‘फोहोरको पहाड’ भास्सिन थालेकाले सातायता काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट फोहोर बोकेर पुगेका टिपर ‘फोहोरको पहाड’ चढ्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १०:१९
पहिले फोहोर खाल्डोमा फालिन्थ्यो, अहिले खाल्डो पुरिएर पहाड बनेको छ । फोहोर बोकेर गएका टिपरले त्यही पहाडको टुप्पोमा पुगेर अनलोड गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
वर्षातका कारण फोहोरको पहाड भास्सिँदै गएको छ । ठाउँ–ठाउँमा धाँजा फाटेर जमिन पनि कोल्पुखोलातर्फ धस्सिन थालेको छ । फोहोरमाथि खनिएका सडक हिलो र चिप्लो भएकाले लोड बोकेर गएका टिपर फोहोरको थुप्रोमा चढ्न नसकी अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
छोरीहरुको काँधमा डा. देवकोटाको पार्थिव शरीर
विद्युतीय शवदाह गृहमा गरियो डा. उपेन्द्र देवकोटाको अन्त्येष्टि
असार ५, २०७५ तस्बिर : कविन अधिकारी
काठमाडौँ — दक्षिण एसियाकै अब्बल स्नायु चिकित्सक विशेषज्ञ डा. उपेन्द्र देवकोटाको मंगलबार दिउँसो पशुपतिस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अत्येष्टि गरिएको छ । उनको पार्थिव शरीरलाई छोरीहरुले बोकेका थिए । डा देवकोटाको हिजो सोमबार बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा साँझ ५ बजेर ३५ मिनेटमा निधन भएको थियो ।
प्रकाशित : असार ५, २०७५ १६:१६
बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुने ६५ पुगे, ३० जना बेपत्ता [अपडेट]
निर्माणाधीन सिमेन्ट उद्योग खाेलाले बगायो, पाँच मजदूर बाढीमा फसे